यी राशि हुने प्रेमी-प्रेमिका कहिले पनि छुट्नु पर्दैन, तपाई पनि थाहा पाइराख्नुहोस् — Sanchar Kendra
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केही यस्ता राशिहरू पनि छन् जुन राशि भएका प्रेमी प्रेमिका कहिले पनि छुट्दैनन् । उनीहरूको सम्बन्छ एकदमै बलियो हुन्छ । शास्त्रका अनुसार नै १२ राशि रहेका हुन्छन् । ती राशि अनुसार मानिसको स्वभाव आचरण फरक रहेको हुन्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मानिसहरूको प्रेम सम्बन्छ पनि फरक फरक हुने कुरा ज्योतिषहरू बताउँछन् । त्यस कारणले कुन कुन राशिका व्यक्तिहरूको प्रेम सम्बन्ध बलियो हुन्छ त? हेर्नुहोस् उक्त राशिफलहरूः
एक अटुट विश्वास र प्रेमले भरिपूर्ण जीवन कसको पो चाहना हुँदैन होला र ? तर के मानिसले साचेजस्तै सम्बन्ध हासिल भइरहको होला त ? पक्कै पनि छैन । आफ्नो क्षेत्रमा निकै सफल र नाम, पद, प्रतिष्ठा र ईज्जत कमाएका भनिएकाहरुको पनि दाम्पत्य जीवन नारकीय रहेको समाचारहरु आईरहेको छन् । अक्सर केवल एक अर्काबीचको अविश्वास मात्रै सम्बन्ध विग्रने प्रमुख कारणको रुपमा लिइएको थियो । तर अविश्वाससम्म पुग्नु शंका पैदा हुने केही यस्ता कारणहरु छन् जसले गर्दा एक अर्काबीचकाे भरोसामा प्रश्न खडा हुने गर्दछ । जसको अन्तिम विन्दु अन्तत तिक्ततापूर्ण विछोड हुने गर्दछ ।
१.के त्यो मित्रता एकअर्कामा लुकाइएको छ ? के तपाइले त्यो मित्रताको बारेमा सोध्दा के “चिन्ता नगर” वा केही निराशाजन्य जवाफ आउँछ ? त्यो मित्रतालाई अन्त्य गर्नु भन्दा “नो” भन्ने जवाफ आउँछ ? के तपाइबाट सम्भावित शंका निवारण गर्न सीमाहरुलाई बन्देज गर्न खोजिएको छ ? तपाइहरुकाबीचमा केही खटपट हुँदा उक्त तेस्रो मानिससँग त्यो कुरा पुगेर विभिन्न टिका टिप्पणी हुने गर्छ ? यदि यी उल्लेखित प्रश्नहरुको जवाफ सकारात्मक आउँछ भने तपाईको पार्टनरको अरु कोहीसँग सामान्य साथीको मात्र नभएर कुनै अन्तरङ्ग सम्बन्ध रहेको हुन सक्छ ।
२. सशर्त प्रेम : त्यस्तै अर्काे लक्षण जसले सम्बन्धलाई दरार बनाइरहेको हुन सक्छ, त्यो हो स्वार्थगत अथवा सशर्त प्रेम । यदि तपाइको प्रेमी वा पार्टनर केवल केही प्राप्तिको आशाले मात्रै जोडिएको छ, वा खुशी छ भने त्यो वास्तवमा तपाइको प्रभावले होइन बल कि तपाइद्धारा तत्कालीन स्वार्थ पुर्ति गर्न हुनसक्छ जुन कुराले चिरस्थायी सम्बन्धको जग भत्काउने कार्य गर्छ । अब कसरी निशर्त प्रेम स्थापित गर्न सकिन्छ त ? खुलेर कुनै पनि समस्याको बारेमा कुरा गर्नुस् । नियमित कुराकानीले प्रेममा ताजापन ल्याउँछ भने समस्याको समाधानको उपायहरु दिने गर्दछ । तर यो सबै त्यतिखेर हो जतिखेर दुवै पार्टनर एकअर्कालाई गुमाउन चाहँदैनन् ।
सर्वप्रथम यदि समस्याको चुरो कुरो पत्ता लगाउने । एक अर्कामा सांस्कृतिक लगायत कार्यक्रमहरुबाट सामिप्यता बढाउन कोसिस गर्नुस् ।
एकअर्कामा इमानदार हुनुस् । यदि यो सबै कार्यले पनि समस्या समाधान भएन भने अझै तपाइमै समस्या होला वा तपाइको पार्टनरमा खोज्नुस् र उचित समाधानतर्फ लाग्नुस् ।